Xildhibanka degmada mutuga oo codsi u diray Maxkamada kutaalo Maamul goboledka Kwale – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibanka degmada mutuga oo codsi u diray Maxkamada kutaalo Maamul goboledka Kwale
Xildhibaanka degmada Matuga u matala aqalka baarlamaanka ayaa waxaa uu codsi u diray Maxkamada kutaalo Magaalada kwale taas oo ku aadan in la sii daayo wiil uu dhalay oo goor sii horeysay dacwada lagu soo oogay xukuna lagu riday.
Maxkamad fadhigeedu yahay magaalada Kwale ayaa xukun dil ah ku diray 2 ruux oo uu ka mid ahaa wiil uu dhalay xildhibaankaasi kuwaas oo lagu helay dambi ah in ay fal dhac iyo qalalaase isugu jira geysteen.
Labada dambiile ayaa xukunkooda waxa uu daba socday maxkamadeyn ay ku wajahayeen eedeymo ku saabsan in ay qof dalxiise ah u geysteen weerar burcadnimo ah.
Xildhibaanka ayaa shalay oo isniin eheyd u sheegay maxkamada in wilkiisa uu ku dhibaatesyan yahay gudaha xabsiga sidaas awgeed ay soo dadajiso dhageysiga racfanka uu ka qaatay xukunka lagu riday wilkaasi oo lagu magacaabo Mafanikio Mwanyoha.
Racfaan uu ka qaaday kiiskaasi ayaa la filaayay in la dhageysto shalay oo isniin ahayd balse waxa la sheegay in dib loo dhigay kadib markii la waayay qaar kamid ah filalkii dacwadaha ku qornaa.
Falkaan ayaa 19-ki bishii August ee sanadkii la soo dhaafay ee 2015-ki ka dhacay xaafad ku taalla magaalada Diani, halkaas oo dalxiisaha looga qaatay lacag dhan 125 euros oo u dhiganta (Sh14,360).
Garsooraha maxkamadda Kwale oo lagu magacaabo Cosmas Maundu ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee lagu riday Mafanikio Mwanyoha oo sidoo kale loo yaqaanno Fani Hussein 12-kii bishii April ee aynu soo dhafnay oo ah wiilka uu xildhibaanka dhalay iyo qofka la socday oo isna magaciisa lagu sheegay Ali Hassan.
Mr Mafanikio ayaa ku adkeystay in uusan fal dambiyeedkaas geysanin waxana uu codsaday in la cafiyo, hase ahaatee Hassan oo dambigiisa qirtay ayaa garsoorka maxkamadda ka dalbaday in go’aan laga gaaro arrintiisa oo xukunkiisa lagu dhawaaqo.
← Dowladda Afganistan oo ku dhawaaqday in lasoo af jaray howlgalkii laga fulinayay xarun ay weerareen Taliban
Senetarada oo yeelan doona fadhi ay ooga hadlayaan arrinta Gavanaha Maamul goboleedka Nyeri →